Natraygroup | Mother’s Day Special
Posted by natray | May 04, 2016	| PROMOTION |
ချစ်ခင်ရပါသော Customer များ ခင်ဗျာ….
လာမယ့် မေလ (၈) ရက်နေ့ဟာ Mother’s Day ဖြစ်ပါတယ်…
လူတိုင်းမှာ အမေရှိကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါဟာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးပါ။
မိမိ တစ်ဘဝလုံးကို သားသမီးအတွက် အပြုံးမပျက် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်လာတဲ့ မိခင်တို့ရဲ့ ဂုဏ်ကို ချီးမွမ်း ဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့နေ့ဖြစ်တာမို့ ဇရာကြောင့် အလှတွေ ပျက်လို့ အိုမင်းနေပါစေ ဘယ်တော့မှ မပျက်စီး မအိုမင်းတဲ့ မိခင်မေတ္တာတရားအတွက် အမေ့ပါးတစ်ဖက်ကို နမ်းရင်း အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်မွန် တစ်ခုခု ရွေးချယ် ဝယ်ပေးကြရင် မကောင်းဘူးလား ခင်ဗျာ။
Casabella မှ Mother’s day အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ အထူး Promotion တွေ ရှိနေပါတယ်…..
motilium quando prenderlo buy valtrex for cheap 🎁 အမေ့အတွက် နူးနူးညံ့ ညံ့ တဘက် Towel လား ???
🎁 အမေ့ခေါင်းလေးကို သာသာယာယာ ဖြစ်စေပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျစေမယ့် ခေါင်းအုံးလား ???
🎁 အမေ့အိပ်ရာလေးကို အလှဆုံးနဲ့ သက်သောင့်သက်သာအဖြစ်ဆုံး ရှိစေမယ့် အိပ်ရာခင်းလား ???
is cialis super active real 🎁
РєСѓРїРёС‚СЊ СЃРёР°Р»РёСЃ РѕРЅР»Р°Р№РЅ РєСЂС‹Рј
cialis online daily cheap cialis in the us ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အမေ့လက်ရာကို အကောင်းဆုံးဂုဏ်ပြုဖို့ အရည်အသွေးမြင့် မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းလား ???
🎁 အိမ်မှုကိစ္စတွေ မပြတ်လုပ်ရင်း ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေတဲ့ အမေ့ကို ကျန်းမာရေး
ကောင်းစေမယ့် ပစ္စည်းတွေလား ???
အများကြီး မစဉ်းစားဘဲ သင့်မိခင်အတွက် ပစ္စည်းကောင်းတွေ အစုံအလင်ရှိတဲ့ Casabella ကိုသာ ကြွလှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ခင်ဗျာ….
သိတတ်တဲ့ ကျေးဇူးတရားနဲ့ မိခင်ရဲ့ အပြုံးကိုခြွေမယ့် သားသမီးတိုင်း အတွက် Casabella မှ Mother’s Day အထူး Promotion ကို မေ လ (၅) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး မေ လ (၉) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ….။
Coming 8th May is Mother’s Day.
Please honour your Mom for what she has done with purest love.
Beagood son oragood daughter giving special gifts to your beloved Mom.
We are ready to celebrate the special day of motherly love, offering mother’s day special promotion. Please come and visit to Casabella for choosing the best gifts to your Mom.
The promotion is from 5th May to 9th May 2016.
Happy Mother’s Day again!
Available at :Casabella Home Furnishing Center